नियम उल्ट्याएर तजबिजीमा पदक – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
डा.सन्दुक रूइतलगायत केहीलाई छोडेर पदक र विभूषण पाउने सूचीमा रहेका अधिकांशको योगदानबारे प्रश्न
| प्रकासित मिति : ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
काठमाडौँ /संविधान दिवसका अवसरमा आँखा विशेषज्ञ डा। सन्दुक रुइतले यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री ९प्रथम० पदक पाए । नेपालको आँखा उपचारमा उनले गरेको योगदानका कारण उक्त पदक पाउनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पदक पाए । उनीहरूले पनि योगदानका आधारमा पदक पाउनु स्वाभाविकै हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा। सुभाष आचार्य अब्बल चिकित्सक हुन् । यस पटक संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेमा उनको समेत नाम छ । करिब ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले उनले पदक पाए । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। प्रेमराज ज्ञवालीले पनि पदक पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न उनले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालबाट मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पदकमा पनि उनी छुटेनन् ।
पञ्चायतकाल र २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालमा समेत विभिन्न पेसारव्यवसाय र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिने व्यवस्था थियो । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आसेपासे र ‘सत्ताको भक्ति’ गाउनेहरू तक्मा पाउनेको सूचीमा बढी देखिन्थे । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका करिब ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृहमा बेवारिस छन् ।
गत साता मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । साना र खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको तर सत्ता निकटका र अन्य ठूला भ्रष्टाचार छानबिन नगरेको भनी उनको चर्को आलोचना भयो । यस्तो शैलीले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान हुन सक्दैन भनी चर्का टीकाटिप्पणी भएका बेला सरकारले घिमिरेलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री ९द्वितीय० बाट विभूषित गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयबाट अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले सत्तालाई ‘नचिढ्याएको र सुरक्षित महसुस गराएको’ थप पुष्टि भयो ।
गत असारमा संशोधन गरिएको विभूषण नियमावलीमा अधिकतम संख्या किटान गरिएको थियो । नियमावलीको नियम ३४ ९क० मा ‘मानपदवी, अलंकार र पदक प्रत्येक वर्ष बढीमा दुई सयको संख्यामा प्रदान गर्न सकिनेछ, त्यसमध्ये मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक पचास–पचास जनालाई दिन सकिने’ व्यवस्था थियो । तर त्यसपछिको संशोधनले संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारबाट सिफारिस भई आएका तक्मा पाउनेको नाम घोषणा गरेकी थिइन् । जसअनुसार ५ सय ९४ जना व्यक्तिको सूची सार्वजनिक छ । यस पटक मानपदवी ४ सय ५३, अलंकार १ सय १४ र पदकमा २७ जनाको नाम घोषणा गरिएको हो ।
यस पटक सरकारले विभिन्न ५ तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिएन । महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैले पाएनन् । मानपदवीको छैटौं वरीयताक्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम वरिष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ डा। सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको हो । यसैगरी कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थमा ८, प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थमा २ सय ४२, जनसेवा श्री पञ्चममा १ सय १४ जनाको नाम घोषणा गरिएको छ ।
केही सरकारी कर्मचारीले पदमै बसेर पनि आफूलाई पदक सिफारिस गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले २०७३ र २०७४ सालमा आफूलाई पदक सिफारिस गरे । त्यतिबेला रेग्मी सिफारिस समितिका सदस्य सचिव थिए भने सुवेदी निर्णय हुने मन्त्रिपरिषद्मा थिए । रेग्मीले त त्यतिबेला आफ्नै बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई समेत पदक दिलाएका थिए । २०७१ सालमा सूर्यप्रसाद सिलवाल र २०७३ सलामा नारायणगोपाल मलेगोले आफूलाई पदक दिलाए । मलेगो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । २०६७ सालमा तत्कालीन गृहसचिव डा। गोविन्द कुसुमले आफैंलाई पदक सिफारिस गरेका थिए । त्यो विवाद अदालतसम्म पुर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पदक वितरणमा निष्पक्षता देखिनुपर्ने भन्दै स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति सिफारिस समितिमा भएमा त्यसले निष्पक्षता पुष्टि गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार छापिएको छ ।
आभास रानाको लघुचलचित्र ‘घटनास्थल’ सार्वजनिक ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
सिकाइमा अनलाइन प्रभावकारी ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
नाम मात्रका कोभिड अस्पताल, उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदै संक्रमित ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
करका अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनमै ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
बूढीगण्डकी आयोजना : सरकारै पिच्छे फरक निर्णय, भट्टराईको आरोपले थप शंका ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
कठिन बन्दै भान्सा : अत्यधिक महँगी बढ्यो ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : बाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
सेभ द माइन्डद्वारा सिद्धि छात्रावासमा खाद्यान्न सहयोग। ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
भारतीय खसीबोका भित्रिँदा नेपाली किसान मारमा। ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
मलेसियामा अपहरण, नेपालमा बार्गेनिङ ! ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
“श्रदान्जली” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०
डा. केसीसँग वार्ता गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:५०